သင်စိတ်ကူးထားသည့် အလုပ်ကိုရှာဖွေရန် နည်းလမ်း ၅ ခု | Mycanvas
သင်စိတ်ကူးထားသည့် အလုပ်ကိုရှာဖွေရန် နည်းလမ်း ၅ ခု
ထိရောက်သော အလုပ်ရှာဖွေမှုနှင့် အလုပ်ရှင်၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဂရုတစိုက် တွေးခေါ်မှု၊ သုတေသနနှင့် ဗျူဟာများ လိုအပ်ပါသည်။ သင့်အလုပ်ရှာဖွေမှုကို အမြင့်ဆုံးကူညီပေးပြီး သင်အလိုရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိစေရန်၊ ဤအဆင့်ငါးဆင့်ကို လိုက်နာရန် စဉ်းစားပါ။
1. သင့်အလုပ်ရှာဖွေမှု စံနှုန်းများကို နားလည်ပါ။
ကုမ္ပဏီအနေအထား၊ လစာ သို့မဟုတ် တိကျသောအလုပ်ရာထူးဖြစ်စေ သင့်ထိပ်တန်းဦးစားပေးငါးခုကို ပုံဖော်ကြည့်ပါ။ “ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာတွေကို နားလည်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်း၊ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် သင့်လျှောက်လွှာတွေကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ ပိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်” ဟု Ceridian ၏ HR ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီမှ စွမ်းရည်ရှာဖွေမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Paul Sandusky က ပြောကြားခဲ့သည်။
လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်ပါစေ။ “သင့်ရဲ့ တိကျသေချာမှုက သင့်ရဲ့စိတ်ကူးကုမ္ပဏီမှာ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအလုပ်က သင့်ရဲ့စိတ်ကူးကို ကုန်ကျစရိတ်မများစေချင်ဘူး” ဟု အလုပ်ခွင်အဆင့်သတ်မှတ်မှုများနှင့် အလုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဆိုက် Glassdoor မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ Mariah DeLeon က အကြံပေးသည်။ သင်အလုပ်လုပ်လိုသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်တစ်ခုအတွက် အင်တာဗျူးဝင်မည့်နေရာသို့ ရောက်သော်လည်း ၎င်းသည် သင့်လျော်မှုမရှိပါက HR သို့မဟုတ် အလုပ်ခန့်အပ်သူသည် သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ထိုနေရာတွင် အလုပ်လုပ်လိုသောဆန္ဒနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရန် အကြံပြုထားသည်။ . ထိုကုမ္ပဏီအတွင်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းများ အမြဲဖွင့်ထားနိုင်ခြေရှိသည်။
2. သင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အလုပ်များစာရင်းကို ဖန်တီးပါ။
အလုပ်တစ်ခုတွင် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနိုင်သည်နှင့် သင့်ရှာဖွေမှုတွင် သင့်အား လမ်းညွှန်ရန် ဤသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုပါ။ အချက်အလက်များကို ခြေရာခံရန် စာရင်းတစ်ခု ဖန်တီးပါ။ Sheryl Sandberg သည် Harvard Business School မှ ဘွဲ့ရသောအခါ သူမ၏ အလုပ်ရှာဖွေမှုကို စုစည်းရန် Excel စာရင်းဇယားကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးပုံစံကို အသုံးပြုပါ။
3. အလုပ်ဖော်ပြချက်ကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
“ကုမ္ပဏီများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့၏မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်များအတွက် အကန့်အသတ်ရှိပါသည်၊ ၎င်းသည် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခု သို့မဟုတ် သီးခြားအလုပ်အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါစေ” ဟု Sandusky က ရှင်းပြသည်။ “[သို့သော်] သင်သည် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါက ရာထူးတစ်ခုသို့ လျှောက်ထားသင့်သည်၊ သင်၏ ကျွမ်းကျင်မှု သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံများကို လက်တကမ်းရှိ အခွင့်အလမ်းနှင့် မည်ကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ကြောင်း အတိအကျ ရှင်းပြရန် ပြင်ဆင်ထားပါ။”
4. သင်၏ CV နှင့် Cover letter တို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
ကုမ္ပဏီ၊ ရာထူး၊ အလုပ်လိုအပ်ချက်များနှင့် စကားပြောရန်အတွက် သင့် CV နှင့် Cover letter ကို သေချာပြင်ဆင်ပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏ “ဗားရှင်းများ” အများအပြားရှိခြင်းသည် သင့်အတွေ့အကြုံကို သီးခြားအခန်းကဏ္ဍတစ်ခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု Sandusky က ပြောကြားခဲ့သည်။
5. သင်၏ လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ရက်ကို အသုံးပြုပါ။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာကို ကြော်ငြာမထားပါ။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပွဲများနှင့် ကွန်ဖရင့်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကျောင်းသားဟောင်းများ ပွဲများ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများကို တက်ရောက်ရခြင်းသည် အခရာကျပါသည်။ သင်ရှာဖွေနေကြောင်း လူများအား အသိပေးပြီး ပွင့်လင်းသောရာထူးများအကြောင်း မေးမြန်းပါ။
ထို့အပြင်၊ သင်ရှာဖွေနေကြောင်း သင့်သူငယ်ချင်းများကို အသိပေးပြီး သင့်အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရန် သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို ၎င်းတို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေထဲက အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ဟာ လူတိုင်းကိုသိပြီး လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်တဲ့ လူတော်တော်များများကို သိတဲ့လူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေရာတွင် အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးထက် သင့်အလုပ်ရှာဖွေမှုကို အာရုံစိုက်ပြီး သင့်ဆက်ဆံရေးကို အသက်သွင်းခြင်းသည် သင်ပြုလုပ်ရမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။